Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၂) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on September 3, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	မင်္ဂလာပါ သည်နည်းလမ်းလေးကတော့ ကွန်ပျူတာအတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သော နည်းလမ်းများထဲက အပိုင်း(၂) ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်… အဓိကတော့ မိမိတို့ စက်ဝင်းဒိုးတင်ပြီးခါစ မှာပိုပြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်..နော်.ကွန်ပျူတာ ဆားဗစ်သမားတွေအတွက် မလိုအပ်ပေမယ့် လေ့လာခါစ ညီငယ် မောင်မယ်များအတွက် ၀ါသနာရှင်အဆင့်အနေနဲ့ ကျွန်တော်..လေ့လာ မှတ်သားမိသလောက် ပြန်လည် မျှဝေခြင်းပါ… ကဲစမယ်
အဆင့် (၁) အနေနဲ့ မိမိတို့ ကွန်ပျူတာ start ကနေ ဖြစ်စေ Win + R ကိုတွဲကလစ်သည်ဖြစ်စေRun Box ကိုခေါ်လိုက်ပါ… ကျလာတာနဲ့ “gpedit.msc” ကိုထည့်ပြီး ok ပေးလိုက်ပါ….
ခုလိုထည့်တာနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Group Policy Editor ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
ပုံသေခြာ မမြင်ရပါက ကလစ်လိုက်ပါ… နံပါတ်စဉ်တိုင်းသွားပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ….
ထိုအထဲမှာမှ ကျွန်တော်တို့က Computer Configuration အောက်က Administrative Template Tool
အောက်က Windows Components ထဲက AutoPlay Policies ထဲကိုဝင်ပီး ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲံ
“Turn offAutoplay” ဆိုတာကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Default အရဆိုရင် Radious Check Box လေးက Not Configured ဖြစ်နေပါမယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်
တို့က Enabled လို့သတ်မှတ်ပီး Turn off Autoplay on ဆိုတဲ့နေရာမှာ All Drives ရွေးချယ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပီးသွားရင်တော့ Apply / OK ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
အဆင့် (၂) အနေနဲ့ကတော့… အစမူလက ၀င်ခဲ့တဲ့ Group Policy Editor ဇယားမှာဘဲ ပြန်ကြည့်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ အပေါ်ကလုပ်ခဲ့သလိုပါဘဲနော်… အပေါ်အဆင့် (၁) တုန်းက Computer Configuration ကနေလုပ်ခဲ့တာပါ ခု အဆင့်(၂) ကတော့ user configuration ကနေလုပ်တာ ပါ….ကျန်တာ အားလုံး အလားတူဘဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…
user configuration အောက်က Administrative Template Toolအောက်က Windows Components ထဲက AutoPlay Policies ထဲကိုဝင်ပီး ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲံ
“Turn offAutoplay” ဆိုတာကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။ Default အရဆိုရင် Radious Check Box လေးက Not Configured ဖြစ်နေပါမယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က Enabled လို့သတ်မှတ်ပီး Turn off Autoplay on ဆိုတဲ့နေရာမှာ All Drives ရွေးချယ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပီးသွားရင်တော့ Apply / OK ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၁) Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၃)
ဆက်လက်ရေးသွားပါ့မယ် ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်… လိုအပ်တာများရှိပါက.. C-Box မှာပြောခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်… အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား ကူညီ မျှဝေသွားပါမည်… ဘလော့ခရီးသည်နေရာလေးများ
← Computer အတွက်လုပ်သင့်သော နည်းလမ်းများ (၁)	android ဖုန်းတွေပေါ်မှာဘောလုံးပွဲတွေကို တိုက်ရိုက်ကြည့် မယ့် apk များစုစည်းမှု့→